Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamada Sare ee Kenya oo Go’aamisay in Doorashada Dib Loogu Noqdo.
Maxkamada Sare ee Kenya oo Go’aamisay in Doorashada Dib Loogu Noqdo.
Posted by ONA Admin	/ September 2, 2017
Maxkamada Sare ee dalka Kenya oo todobaadyadii lasoo dhaafay dhageysaneysay dacwada ay Xisbiga Mucaaridka ee NASA ka gudbiyeen dowlada iyo guddiga doorashada inay musuq maasuqeen natiijada Doorashada Madaxweynaha, ayey 6-da Garsoore ee Maxkamada Sare amreen in markale dib loo qabto doorashada 60 maalmood gudahood.
Go’aanka Maxkamada Sare oo si weyn loo sugayey maalmahan ayaa lagu dhawaaqay Jimcihii, waxaana durbaba bilowday dibad-baxyo ay ku dabaal degayaan taageerayaasha Mucaaridka Kenya ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa isugu soo baxay magaalooyinka ay ku xoogan yihiin iyo xaafada ku yaal Nairobi ee sida weyn looga taageero isbaheysiga mucaaridka ee NASA.
Lixda Garsoore waxaa go’aankan codka u qaaday 5 kaliya, maadaama Garsoore Maxamed Ibrahim uu jiraday maalintii labaad ee dhageysiga dacwada bilaabatay, halka hal garsoore uu kasoo horjeestay go’aankan waxaana isku cod noqday 4 Garsoore oo iyagu sheegay in gebi ahaan la laalay natiijadii Doorashadii 8-dii Agoosto ee la sheegay inuu ku guuleystay Madaxweynaha xilka haya Uhuru Kenyatta.
Guddiga Doorashada ee IEBC ayaa la amray in ay doorasho cusub soo diyaariyaan 60 maalmood gudahood. Qareenada difaacayey Guddiga Doorashada ee IEBC iyo Madaxweyne Kenyatta ayaa codsaday in Garsoorayaasha faah faahiyaan go’aankooda iyagoo ay lama filaan ku noqotay go’aanka maxkamada sare.
Qareenka u doodayey Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ah qareen Soomaali ah oo kamid kuwa ugu caasan dalkaasi Ahmed Nasir Cabdullahi ayaa go’aanka Maxkamada Sare ku tilmaamay mid siyaasadeesan, isla markaana aysan wax shaki ah ku jirin cida ku guuleystay doorashada oo ay shacabka codkooda siiyeen.
Wuxuuna Qareen Ahmed Nasir u riyaaqay halka Garsoore ee go’aanka kasoo horjeestay waxayna ahayd Haweenayda Garsooraha ah ee lagu magacaabo Njoki Ndung. Halka Qareenada matalaya Mucaaridka NASA oo uu horkacayo Qareenkooda 1aad ahna Senator James Orengo uu go’aanka Maxkamada ku sheegay mid sax ah oo docda kale Taariikhi ah.
Warka kasoo baxay Maxkamada sare ayaa guul weyn u ah hogaamiyaha Mucaaridka Raila Odinga iyo kuxigeenkiisa Kulanzo Musyoko oo iyagu dacwada keenay, Odinga ayaa isagu ay u tahay markii 4-aad oo uu u tartamo xilka Madaxweynaha isla markanaa laga guuleysto, mase cada inuu marka shanaad iyo doorashada dib loo qabanayo uu wax guul ah ka gaari doono, hase yeeshee go’aanka maxkamada ay maanta soo saartay ayaa ah mid ay si weyn usoo dhaweeyeen.